( Sunday, June 13, 2021)
इन्टरनेट सेवामा बजार हस्तक्षेप गर्दै सीजीको प्रवेश, ९९९ रुपैयाँमै १२० एमबीपीएस !
काठमाडौं । सीजी कम्युनिकेसन्सले मंगलबारदेखि काठमाडौं उपत्यकामा इन्टरनेट सेवा सुरु गरेको छ । उपभोक्ताले नेपाली
एनसेलद्वारा सरकारी अस्पतालहरुलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर्स
काठमाडौं । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले यस कोरोनाभाइरस रोग (कोभिड १९) को संक्रमणले ल्याएको महामारीको जोखिमकम
‘वर्क फ्रम होम’लाई सहज बनाउन नेपाल टेलिकमको सेवामा थप सुविधा !
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले निषेधाज्ञाको समयमा घरमै बसी वर्क फ्रम होम, अनलाइन क्लास, वेबिनार जस्ता
टेलिकमको भीओएलटीई सेवा सुरु
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले वायरलेस प्रविधिको चौथो पुस्ताको फोरजीमा एलटीई प्रविधि अन्तर्गत भीओ एलटीई सेवा
ओलीको अहंकार चुलिँदो, एकपछि अर्काे मूल्य चुकाउँदै एमाले !
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) भित्रको अन्तरसंघर्ष चुलिँदै जाँदा पार्टीले एकपछि अर्को क्षति
कोभिडले आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणमा सघाउन संघईको अपिल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्का सभापति रामचन्द्र संघईले कोभिडा कारण
ओलीको अधोगति सुरु, माधव-झलनाथ समूह बलियो बन्दै !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिरहँदा उनको राजनीतिक शाख जसरी ओरालो